अर्धचालक अभाव कम्पनीहरु कार कटौती गर्न सक्दछ - सांप्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
सेमीकन्डक्टर छोटो कम्पनीहरु कारहरु काटना
जनवरी 8, 2021 जनवरी 8, 2021 जर्ज मिटिम्बा एशिया, एशिया फ्रीलान्सिंग ग्लोबल गिग, एशिया थोक र B2B, व्यापार, चीन, चीन फ्रिल्यान्सिंग ग्लोबल गिग, चीन थोक र B2B, युरोप, विशेष समाचार, जर्मनी, जर्मनी फ्रिल्यान्सिंग ग्लोबल गिग, जर्मनी थोक र B2B, ग्लोबल विश्व, जापान, जापान फ्रीलान्सिंग ग्लोबल गिग, जापान थोक र B2B, समाचार लेख
अर्धचालकहरुको अभावले अन्य मोटर वाहन उद्योगहरुलाई पनि प्रभावित गरेको छ।
यसले दुबै वितरकको कम्पोनेन्ट पार्ट्स अधिग्रहण गर्ने कार कम्पनीहरूबाट, सम्पूर्ण उद्योगमा विस्तृत प्रभावलाई ट्रिगर गर्नेछ।
टेस्लाले चिनियाँ कार बजारमा उल्लेखनीय प्रगति गरिरहेको छ।
समाचार स्रोतका अनुसार, निसानले सेमीकन्डक्टर सामग्रीको अभावका कारण सवारी साधनको उत्पादन घटाएको छ। जापानी कम्पनी हुनेछ नोट कम्प्याक्ट कारको विकास 5,000,००० एकाईले घटाउनुहोस् जनवरी २०२१ मा। आउटपुट फेब्रुअरीमा सुरू हुने कम हुने आशा गरिएको छ।
निसान मोटर कम्पनी, लिमिटेड, निसान मोटर कर्पोरेशनको रूपमा व्यापार गर्दछ र अक्सर निसानमा छोटो हुन्छ, जापानी बहु-मोटर वाहन निर्माता हो, जसको मुख्यालय निशि-कु, योकोहामा, जापानमा छ।
अर्धचालकहरुको अभावले अन्य मोटर वाहन उद्योगहरुलाई पनि प्रभावित गरेको छ। जनरल मोटर्स जनवरी मा मांग दशौं कटौती गर्न सहमत भइसकेका थिए। अवस्था गाह्रो छ निसान, किनकि तिनीहरुका सवारी साधनहरु को लागी पर्याप्त अर्ध कन्डक्टरहरु प्रदान गर्न सक्दैन।
निसानको जनवरीमा १ 15,000,००० कम्प्याक्ट सवारी साधन निर्माण गर्ने योजना रहेको थियो तर कम्पोनेन्टको अभावमा following,००० ले घट्यो। निसान नोट कम्पनीको सबैभन्दा प्रख्यात ब्रान्ड हो, जुन डिसेम्बर २०२० मा रिलीज भएदेखि राम्रो बिक्री भईरहेको छ।
ओला कैलेनियस, डेमलर प्रमुख कार्यकारीले भने, २०२० मा "पूरै चिप उत्पादन उद्योग केही बेरमा फ्याँकियो।" त्यसले "धेरै वा धेरै [निर्माताहरू] लाई कुनै न कुनै आकार वा रूपमा असर गरिरहेको थियो।"
"मँ खुसी छु कि हामीसँग लचिलो उत्पादन प्रणाली छ किनकि हामीलाई यसको आवश्यकता पर्छ," उनले थपे। "हामी अवस्थालाई शान्त पार्न जे गर्न सक्छौं, गरिरहेका छौं।"
निसानले आर्थिक वर्ष २०२१ मा विश्वव्यापी 3.8. 2021. लाख सवारी साधनहरू निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ, जसमध्ये 560,000०,००० इकाईहरू घरेलु रूपमा उत्पादन हुन्छन्। जनवरी मा कटौती वार्षिक आउटपुट तालिका को १% को लागी खाता, तर सेमीकन्डक्टरको जटिलता एक ठूलो चिन्ता जारी गर्न पूर्वानुमान गरिएको छ।
निसानले फेब्रुअरीमा र यस भन्दा पछाडि बिरूवा राजस्व घटाउने प्रक्षेपण गरिएको छ। सेमीकन्डक्टर सामग्रीको लागि विश्वव्यापी आपूर्ति घट्ने छ किनभने स्मार्टफोन र पाँचौं-पुस्ता वायरलेस स्टेशनहरूको विशाल मागको कारण।
जापानका सवारी साधन उत्पादकहरूको साथसाथै, वोक्सवैगन उत्तरी अमेरिका, युरोप र चीनमा यात्री कारहरूको विकास घटाउने इरादा रिपोर्ट गरेको छ। सेमीकन्डक्टर कच्चा मालको अभावका कारण जर्मन अटो पार्ट्स कम्पनीहरू, कन्टिनेन्टल र बॉशले ग्राहकहरुलाई लडाईमा भएको ढिलाइलाई स्वीकारेर प्रतिक्रिया जनाएको छ।
"स of्कटको प्रारम्भिक चरणमा उद्योग बन्द भएपछि र मागमा भएको अचानक गिरावटपछि, सबै क्षेत्रका अटोमोबाइल उत्पादकहरूले बजार विज्ञहरूले अपेक्षा गरेभन्दा धेरै चाँडो उत्पादन उत्पादन बढाए," कन्टिनेन्टल भन्यो।
"छ देखि नौ महिनाको नेतृत्व समय संग, अर्धचालक उद्योगले मोटर वाहनको माग मा यो अप्रत्याशित वृद्धि पूरा गर्न पर्याप्त छिटो अप गर्न सकेको छैन," यो जोडी।
टेस्ला चीन बजारमा
टेस्ला चिनियाँ कार बजारमा यसको कम लागतको प्रविधि र सस्तो खरीदका कारण उल्लेखनीय प्रगति गर्दैछ। त्यस्तै टेस्ला मोटर्सले बारम्बार मोडल aut अटोमोबाइलको मूल्य घटाएको छ, साथ साथै नयाँ मोडल वाई मध्यम आकारको एसयूवी।
यस वर्षको सुरूमा टेस्लाको सेयर मूल्यमा महत्वपूर्ण रकमले बढेको छ, जसले यसको सीईओ एलोन मस्कलाई बनाएको छ। संसारको सबैभन्दा धनी मानिस। श्री कस्तूरीले भने कि चीनको यातायात क्षेत्रबाट आएको घट्दो मागले उनीहरूको बिक्रीमा खासै असर गरेको छैन।
केही कम्पनी कमेन्टर्स भविष्यवाणी गर्दछन् कि टेस्ला चिनियाँ ग्राहकहरु लाई बढी आकर्षित भैरहेको छ किनकि यसको सेवा गर्ने क्षेत्रहरु को कारण उनीहरूले यो पनि भन्छन कि चिनियाँ बजारमा प्रतिस्पर्धीहरुको ठूलो संख्या छ।
चीनमा २० EV२ सम्ममा ईभीले मात्र बनाएको सबै कार बिक्रीको २०% हुनेछ। टेस्ला स्वायत्त कारहरूमा राम्रो ब्राण्ड हो, यसैले चिनियाँ कार निर्माताहरू सन्तोष हुनु हुँदैन।
मोटर सांप्रदायिक समाचार निसान अर्धचालकहरु tesla
जर्जले समाचार कसरी संसार परिवर्तन हुँदैछ, विश्व समाचार प्रवृत्तिले तपाइँलाई कसरी असर गर्छ भनेर स्पष्ट पार्दछ। साथै, जर्ज एक पेशेवर पत्रकार, एक स्वतन्त्र समाचार रिपोर्टर र लेखक हो जुन वर्तमान विश्व समाचारको साथ भावुक छ।
अलीबाबाको संस्थापक चीनमा पूंजीवादको प्रतीक बन्छ
एरोइले स्पेसजेटमा लगानी रद्द गर्दछ
B2B थोक यूरोप - कम लागत नेता
थोक थोक B2B (खरीद बिक्री) कम लागत नेता
B2B थोक भारत - कम लागत नेता
२०२१ मा अवास्ट सेवा उच्च सीपीयू उपयोग कसरी तय गर्ने
उत्पादन अनुकूलन - New नयाँ लोकप्रिय प्रचलनहरू
Binance स्मार्ट चेनमा तपाईंको NFT निर्माण गर्नुहोस्
समानता अधिवक्ता ग्रेशुन दे बोस "जुनन्टीको हजुरआमा" लाई - हामीले यो गरे !!
कसरी जुन १th अन्त्यमा संघीय बिदा हुने ब्यक्तिले "उन्ुन" कालो अमेरिकी आघातलाई मद्दत गर्न सक्छ
इजरायलले नयाँ सरकारमा शपथ लिएको छ
गर्मी को लागी तपाइँको वाणिज्यिक HVAC प्रणाली तयार गर्दै
Sign संकेतहरू तपाईंले बच्चालाई अर्थोडन्टिष्टमा लग्नुपर्दछ
२ गतिशील रणनीतिहरू तपाईंको अनलाइन बैठकहरू जाज गर्नका लागि
किन कम्पनीहरू आउटसोर्स गर्छन्?
कार्यालयमा फर्कन नचाहने कर्मचारीहरूलाई सहयोग गर्दै
तपाइँको सानो ब्यापार वित्त कसरी प्रबन्ध गर्ने
किन तपाईंले सम्भवतः क्रिप्टोकरन्सीमा लगानी गर्नु पर्छ